Kusukela izimoto angenabashayeli ukuba jetpacks - Izindaba Rule
Kusukela izimoto angenabashayeli ukuba jetpacks
Lesi sihloko osesikhundleni “Kusukela izimoto angenabashayeli ukuba jetpacks: ukuhlangabezana iyathutha tech izinto reshaping” lalotshwa Andy Thobekile, ngoba theguardian.com ngoMgqibelo 14th November 2015 14.13 UTC
New Zealand-based umkhiqizo iwuhlelo Martin Aircraft Company siyisibonelo unconventional umshini ezindizayo: a Jetpack engase sengathi esi ovela movie sci-fi, ukube bekungengenxa iqiniso lokuthi kungcono kahle endleleni eya inzuzo.
Ngo-Okthoba, New Zealand civil aviation igunya babeqoqa Prototype yenkampani 12 imodeli Jetpack for nakumikhumbi. I Jetpack fan ezinezinjini, lapho beboniswa ngo-June at the Paris Air Show, ungandiza cishe 1,000 metres uphinde uthele kancane fly up to isigamu sehora. jetpacks yenkampani kulindeleke ukuba babe ayatholakala emakhemisi esikhathini Engxenyeni yesibili 2016.
Ukuthuthukiswa I Jetpack sika ingesinye sezibonelo zalokho imiqondo big futhi kubhejwa big eyenziwayo yonkana kwemabhizinisi alabamnyama zokuhamba-egxile, lapho izinkampani like Martin Aircraft kuthiwa ngezimoto ukuze emaphethelweni ekude ukuthi yini okungenzeka. Siphila on precipice isikhathi lapho izimoto kuyoba 'ezizimele ngokugcwele esikhathini eside ", ngokusho CEO Tesla Eloni Musk. Ngo ucingo electric kwabanikazi bamasheya imoto kule nyanga, walinika 15 ukuze 20 iminyaka.
Kukhona inala ezinye osomabhizinisi zokuhamba izinhlelo ngokufanayo kwemicabango yabo siqu sabo, kusukela mkhathi ezenza izindiza suborbital ukuze aircrafts ukuthi suka kanye nomhlaba zibheka.
The Guardian baya ezimbalwa zalezi izinto ukuze uthole umqondo walo lapho ikusasa zokuhamba iholwa. Sacela ukuthi uqamba eyazisa umuntu azalwa nalo izinselele ezinzima zobuchwepheshe futhi kungani banquma singene lesi sikhala kwasekuqaleni. Sathola kuyinto nethemba lokuhle esiqinile esikhathini esizayo esiseduze lapho strapping on a Jetpack ingaba evamile ngokubheda beshayela.
Martin Aircraft uhlela ukwethula Jetpack yayo engxenyeni sesibili sonyaka ozayo. Le nkampani enikeziwe Guardian nale vidiyo ekukhombisa.
Martin Aircraft CEO Peter Coker uyazi ibhizinisi lakhe kungase kubonakale lusekelwe umbono fantastically engacabangeki.
"Kwakungu indodana yami wathonyelwa ukuhlanganyela inkampani,"Coker kusho, naphezu kwezinselele. "Sasiphakathi on holiday, nendodana yami, osebenzela inkampani Boutique utshalomali eLondon, uyakufanelekela waveza: 'Kungani ungeke ufune ukuba ahileleke ushintsho ezinkulu kuleli zezindiza ekhulwini leminyaka elidlule?' "
Ezisheshayo ukuze uthole jetpacks yakhe ezimakethe, 2015 Kuye kwaba into ngonyaka belinganisa inkampani, eyabika esikhathini izinyanga yamuva locking up izivumelwano, ukubambisana ebukisa design kumakhasimende ezingaba. It uye wanda 53 kweqa 13 izizwe futhi lutholakala Hong Kong stock exchange.
Echaza ikusasa lalowo jetpacks, Coker ubikezela ukuthi "onguthelawayeka in the sky" noma "isici sesine kwezithuthi", lapho umuntu ovamile angakwazi ngokushesha bahambela kwelinye iphuzu eya kwelinye.
"Sasheshe baqaphela Umbuso indawo ezungeze into efana nale mkhulu kunezinhliziyo kuthatha nje Jetpack siqu,"Kusho Coker, a wangaphambili Lockheed Martin executive. "Siphinde sibone ithuba emkhakheni commercial - uwoyela negesi, yezimayini nokulima. "
Umqondo Jetpack ezindizayo kungase kuzwakale kuyisibalo esikhulu ethengisa kanzima ukuba abatshalizimali ezingabazisayo futhi mhlawumbe ibhuloho kude kakhulu ngoba abalingani ezingase zivele kanye namakhasimende. Kodwa Coker uthi nje ukubona into engasiza clinch ukudayiswa. Lapho inkampani wayo uyobe ukhombisa isithombe noma ividiyo umqondo noma presents sibonelo in action, Coker uthi it "ngokushesha kubangela leliphupho engiliphuphile lapho ngineminyaka izinyane". Ngandlela-thile, uthena, kokuthola ukuthi Thenga-in the lula okuyingxenye.
Kuba Ngokuqinisekile ungahlangahlangani kuka surmounting lezi zinselele azalwa nalo lokuhlaziya technical obuhambisana ukwakha isimiso ohlanganisa injini yegesi futhi ezimbili abalandeli ukuthi ahlinzeke lift edingekayo.
"Lapho uthatha abantu ngefilosofi kwalo usebenza kanjani - njengazo zonke emisha emihle, kungcono ukulethwa eziyinkimbinkimbi ukuthi ubukeka elula - they zuza it,"Coker uthi. "Bathola Umbuso indawo kwalo, futhi zonke izinsuku uma siya ukwethula ndawana-thile, othile futhi iza up nabathile indlela ehlukile ukuyisebenzisa. "
Umqondo Next kuhilela pods ezizimele ukukhuluma nomunye. Industrial umklami Tommaso Gecchelin walungiselela Guardian lokhu nendlela okuhunyushwe.
Ezokuthutha emisha like the jetpacks uthatha on ezihlukahlukene kwamanye amafomu - ezinye ukubuka, abanye groundbreaking.
Angenabashayeli imoto ubuchwepheshe ingenye yemikhakha ezishisayo okwamanje, abakhiqizi kusukela Ford kuya Mercedes-Benz okwenza angenabashayeli tech nemidlalo. Izinzwa kanye namakhono zokusiza ngamashumi phakathi themes of the Intelligent Transportation Society of America rethinking Ezokuthutha for the Next 30 Years summit ngo-Okthoba ngo-Washington DC.
I push ngase yokuzimela kuwumgogodla zabaningi zamanje zokuhamba ngempumelelo. Encwadini shareholder ikota yesithathu Tesla BakaJehova bakhipha 3 November, inkampani wabhala ukuthi, "Amakhasimende ethu obeshayela izimoto zabo cishe 250M miles lokhu ikota, ingqikithi esicishe 1.5bn miles kube yimanje. "Tesla, incwadi uya ku, is ngabomvu usuku "lapho singase sikutshele ukuthi kude izimoto zethu ziye zenza amakhasimende ethu '.
ikusasa onjalo kuzenzakalele ukuze engineer Italian nomklami zezimboni Tommaso Gecchelin. Uthi sketched out umqondo Modular ubiza Olandelayo okunokuziphatha yiziphi pods lenemibuto electric ezingaba xhuma uphinde unqamule kwi kwamanye pods njengoba kudingeka, like ezinye isitimela Futuristic ukuthi ungaqala ezincane futhi ikhule ukuba bandise, inkositini-style.
"Ngokusekelwe ubuchwepheshe bethu kanye umsebenzisi udinga izitayela analysis … kungenzeka kakhulu ukuthi esikhathini esizayo siyakwazi uzobona izingxenye mbuso ka ezimakethe zokuhamba,"Gecchelin uthi. "Ngakolunye uhlangothi, cars womuntu enophephela iyoba sasifana namahhashi ne kufika izimoto esinenjini. Ngakho imoto yezemidlalo iyoba abavelele, kanti izimoto muzi uyoba ngaphansi oyifunayo, enikeza abe nesikhala esanele sokuthwala ezihlakaniphile zokuhamba izinhlelo uyonika okulusizo efeza … ukuhamba futhi beya isipiliyoni. "
Yena sihlose umqondo wakhe Landelayo lingaphezu nje umfuziselo lwabagibeli. Kwakungase ngokuphindwe kabili njengoba uhlelo service delivery, namabhizinisi kwamanye amazwe nokuqasha noma ukufuya pods eyabo futhi azithumela zithwesiwe izinto eziya ekhaya yekhasimende.
Gecchelin uthi wacabanga ikhambi ngamakhasimende nxazonke 'umsebenzi, ezokungcebeleka kanye on-funa services [kunoku] traffic nokwenza ". Okwamanje, nangu ekubheka lo mfana ukuthola umxhaso wezimali ukuvumela womshini lwemikhumbi kuqala ukuba sibonise umqondo emhlabeni wangempela. Uthi okwamanje ukhuluma nge imizi German ambalwa mayelana ngokwakha amaxhama engahle.
"Yilokhu amarobhothi futhi self ukushayela technologies kuyoholela," uthena. "Intelligence and self nokushayela uvule amathuba okuba izimoto sebenzisana ncamashi like kwenzeka nge Okulandelayo."
Ngaphandle izithiyo technical, sezithiyo ezinkulu kunazo zonke imi endleleni emisha sinjalo isimo. Cishe 17M izimoto ezintsha kuzobe kudayiswa futhi hit kwemigwaqo e-US kulo nyaka - izimoto ukuthi ngeke maduze uyoshiywa indlela entsha olukhulu kokuthola kusuka kwelinye iphuzu kuya elilandelayo.
Elio Motors isebenzela ukuthuthukisa imoto ezintathu ezinamasondo, Umqondo ngesithuthuthu-like. Le nkampani enikeziwe Guardian nale vidiyo asetshenzisiwe.
Emzamweni ukusungula ngokuvumelana ne isimo, UPawulu Elio Frames Umbuso indawo ye iwuhlelo imoto yenkampani yakhe okuthile okunjengokubengezela iPad. Ngendlela efanayo ithebhulethi engazange kungase kutholakale ukuthi umbulali PC kodwa kunalokho liyanezela uhla abasebenzisi 'ekhona kwamadivaysi, Elio ubona imoto yenkampani yakhe njengoba into efana iPad of egalaji yekhasimende. Phoenix-based Elio Motors uyayisusa oda manje zayo ezintathu ezinamasondo, ngesithuthuthu-like imoto uthola 84 miles engamalitha futhi yiziphi uhlela ukukhulula ngonyaka ozayo nge ezingabizi $6,800 ithegi yentengo.
"Ngicabanga into efana lokhu kufanele kwenzeke,"Kusho Elio, inkampani ogama kakade has ezingaphezu kuka 47,000 ukubhuka imoto yayo. "Ngahlala eNew York City isikhathi esingangonyaka nesigamu, futhi ngangikuthanda uhlelo ongaphansi komhlaba lapho. Uma une ukuthi labantu usayizi, imisebenzi iyathutha mass.
"Ngoba lonke izwe, thina kusobala noma kudingeka ukuthi lowo muntu adilize zonke namadlelo futhi adale enkulu ezinabantu nendaba noma afune ukuthola indlela eyanele ukuze uthole kusukela nedlelo kuya downtowns ukusebenza sikuphi. "
umkhiqizo sibonelo Elio sika ngokomthetho labizwa ngokuthi isithuthuthu, kodwa senziwa Izinsiza like windows amandla, umshini ongenisa umoya, air bag namandla lock iminyango, bonke esemzimbeni elifakwe lapha. Izimoto uzobe ezivezwa Elio eShreveport, Louisiana, ngesikhathi sangaphambili General Motors production Facility.
"Lifanele kube zamanani aphansi kanye high-mileage - it kubenjalo kokubili salabo umsebenzi," uthena. "Lena 'futhi' choice, Ungayikhaci indoda 'noma' choice. Ngakho umqondo uthenga imoto enkulu ngesizathu uthenge khona, futhi une-Elio kakhulu. Ushayela Elio ukuba asebenze, futhi ngoMgqibelo uthathe SUV yakho. "
Elio uthe wanquma ukwethula inkampani yakhe futhi ukwakha imoto yakhe eyingqayizivele emva eliphilayo ukushaqeka kwezomnotho of 2008 - Ngaphezu enkolelweni yakhe yokuthi ibhizinisi imoto elidayisa-based ungomunye 'gamesmanship "nakwezomnotho ukuthi akuzona esivuna omuntu. Enye yezinto wafunda ngokushesha njengoba waqala umkhankaso Elio Motors wukuthi izinto ezimbalwa zimi igcwele ubulukhuni usomabhizinisi njengoba uzama ukuqala inkampani entsha imoto.
"Kukhona izithiyo ngaphezulu ukuze entry kule sikhala kwanoma yini enye Yimina engaziyo,"Elio uthi. "Uma uthatha Tesla aphume ingxoxo, the last somebody isikhathi wadala inkampani imoto yimpumelelo e America ukuthi namanje egijima kwaba Walter P Chrysler in 1925. "
Emuva ngesikhathi sokuntenga komnotho ezweni sihlalise, lapho 'intengo kawoyela ayedabula ophahleni ", Elio uthi waba "uthukuthele kokubona ingcebo ngithulula yaleli lizwe".
"Ngithe, Ngifuna ukwakha $5,000 car ukuthi uthola 65 miles engamalitha ngalinye,"Ekhumbula. "Ngangingazi lutho idatha ukuhlehlisela lokho. Saqala ukusebenza inkinga. Ngisasho namanje ukuthi i $5,000 imoto kube inombolo sexy. Kodwa njengoba bokwakha ngaqala saqala behlangana nabaphakeli entweni engakuyisi zamanani, saqaphela le asikwazanga Ziningi izici ukuthi abantu angalindela. "
Yena okholwa ibhizinisi auto okudayisa udinga ukushintsha ngoba wabenza akuzona esobala nezindleko imoto kanye ngezimali.
"Ngicabanga ukuthi omunye yezinkinga ezinkulu sinqamukile imodeli yebhizinisi,"Kusho Elio, oshoyo uye ephupha ukufuya inkampani imoto negama lakhe kuso kusukela esengumfana young. "I ukuthengwa imoto esinjalo umdlalo ezinkulukazi, okuyinto esenza sibe $6,800 figure. Uma wazi ukuthi yini oyifunayo futhi akukho udaba ngezimali, akufanele bathathe kuwe amahora amahlanu ukuthenga imoto. "
Umqondo XTI Aircraft izici ukusuka mpo kokwehla, ezinganikwa isidingo zezindiza, ngokusho umsunguli uDavide Brody. XTI walungiselela Guardian lokhu nendlela okuhunyushwe mkhiqizo.
Ngemva konyaka Elio waqala inkampani yakhe, Denver-based uDavide Brody wayebekela off phansi endleleni yakhe siqu. uqalisa yakhe, XTI Aircraft, uye wazakhela nomqondo for a-isihlalo eziyisithupha ibhizinisi jet ondiza ufana nomgibeli jet evamile, kodwa twist - liphinde kuthatha off namazwe zibheka.
TriFan yenkampani 600 jet isebenzisa abalandeli ezintathu ducted for the liftoff mpo. Seconds ngemva kokukhamba, wing abalandeli ababili r phambili otate ukuba bayeke indiza ovundlile. A fan aboshelwe Kuvalwa fuselage. Lapho kufika isikhathi sokukhipha umhlaba, inqubo udlala out in reverse.
XTI uthi izindiza kuyoba eside-range mpo-kusukwe yendiza lokuqala commercial. Nezinye izinkampani nazo asathuthuka mpo-ukusuka ubuchwepheshe. Ngo-June, Boeing kwabo kwabonisa a ukusuka eduze-mpo a Dreamliner.
Brody got a inhlansi ugqozi cishe eminyakeni eyishumi edlule ngesikhathi indodana yakhe wayeneminyaka 10 engamashumi baletha ekhaya kumagazini i-Time. Uyakhumbula ukuthi ifake isihloko mayelana usomabhizinisi uzama ukuthuthukisa jet mini ezingaholela suka kanye nomhlaba zibheka.
"Lokho got me becabanga,"Brody uthi. "Uma ubuka kwenzenjani phezu Eminyakeni embalwa edlule mayelana kwentuthuko materials: esinawo izinto lighter babe ukuyengelwa okuphawulekayo jet izinjini. Lokhu jet has izinjini ezimbili turboshaft, plus kwentuthuko kwezobuchwepheshe computer baye bavumela for controllability kakhudlwana futhi ukuzinza ndiza kanye ukushayisana ukugwema. Abanye the angenabashayeli imoto ubuchwepheshe cishe badlala indima aircraft esizayo. "
Brody ukholelwa ukuthi ikusasa le ndiza commercial ngokulinganisela kuzoba ukusuka mpo kokwehla. Ubuchwepheshe kube yize izindleko ekwakheni nasekulungiseni zezindiza nge zezindiza eside. Kungenzeka futhi ukwenza ezindizayo ngisho kufinyeleleke kakhudlwana ngokwakha services air taxi pick up budebuduze nasekhaya wakho uma kungenjalo emnyango wakho phambi.
XCOR Lynx izimoto suborbital ihlose ukuthatha abagibeli kuyiwe iDemo emaphethelweni space. Le nkampani enikeziwe Guardian nale asetshenzisiwe ihumushe ividiyo.
Umngcele ultimate usomabhizinisi zokuhamba, kunjalo, kuba kuleli zwe. California-based XCOR Aerospace uqalile ngokuthengisa amathikithi izindiza Lynx yayo uchungechunge izimoto suborbital, oyothatha abagibeli payloads on isikhala uhambo kuze kufinyelele 330,000 izinyawo ehlala esingaphansi kwehora.
Abagibeli ngeke ngokuyisisekelo kube co-pilot ohambweni - the kuphela nezinye nomgibeli eya ngaphandle pilot. Kanjalo, they uzonikezwa "call isibonakaliso" futhi uzokwazi ukubuka isikhala ngokusebenzisa Lynx abanikeze asebenza nabo kombhede elibheke umbono Lubanzi ka isikhala.
Imoto is powered by esebenza rocket izinjini ezisebenza on kaphalafini okune-oksijini liquid.
"Emongweni lokho esiye sabhekana athuthukiswe at XCOR is a esebenza ngokugcwele injini rocket,"Kusho ilungu lebhodi Michiel Mol. "Lokho kungase kungabonakali ezikhexisa, kodwa empeleni. Zonke ezinye rocket out kukhona ukusetshenziswa yesikhathi esisodwa kuphela. Sine esikubiza reusability osheshayo. Injini Zethu letingandiza, uthinte phansi niqhubeke. "
Kanjalo, isikepe Lynx can, uthena, abagibeli ngokuyisisekelo kuze kube semngceleni isikhala. XCOR sibheke kokuqala test izindiza ehlobo ngesinye elilandelayo bese ukuwasebenzisa ukusetshenziswa kwezentengiselwano eziyisithupha kuya 12 izinyanga emva kwalokho, izindiza kwezohwebo kokuqala cishe 2017.
Le nkampani iye bathengisa amathikithi ambalwa kakade, ikakhulu abathengi abathanda for isikhala. (Futhi ngubani ube nemali ukuchitha: amathikithi kukhona $100,000 flight ngayinye.)
"Sibona zonke astronaut ubani usehambe isikhala obuyile njengoba siye saba nethuba a washintsha ukuphila,"Mol uthi. "Uma ungumuntu laphaya ubumnyama isikhala, ubuka le planethi encane blue kukhanya egqamile green futhi ungqimba elincane lamanzi endaweni ezungeze it, kubukeka sesimweni esiyingozi njengalesi kusukela ngaphandle. Kukwenza kuba lincusa Umhlaba ngokwawo. "
Enye yezinto commonalities ukuthi kuba sobala lapho ukhuluma osomabhizinisi ezinjengalezi yindlela Babheka izifiso zabo njengoba inevitabilities.
Konke – futhi abekho abanye ngokungangabazeki esikhaleni zokuhamba – ukubuka isimo uma kuziwa endleleni esiluthola lapha uye laphaya namuhla njengoba untenable, ukuthi kukhona ukushintsha – nokuthi jetpacks nezitsha suborbital banamathuba amancane a ukubheja ngokwezocansi okuyingozi kunokuvele uhlale nje dekle noma ngokwenza ukulungisa esincane ukuze imiqondo ekhona.
Mol uthi ikusasa zokuhamba futhi kuhilela imibono kanye imiklamo thina cishe engingeke ngikwazi ngisho nokuyicabanga namuhla, ngoba izidingo tomorrowwill kube njalo ongaphezu kovamile.
"Ngicabanga isintu njalo uzama ukuthola yalo futhi uhambe udlulela phambili,"Uthe. "Ngicabanga esikhathini esizayo elikude siyobuye abahlala ku amaplanethi amaningi njengoba zinhlobo. Ngiyaqiniseka kwalowo, yebo. Cishe wayengeke! Sisaphila, Nokho. "
31022	0 Andy abamnene, Isigaba, umkhakha Izithuthi, Business, Environment, Izici, Technology, Tesla, Ikusasa zokuhamba, Travel and transport, izindaba US, izindaba World
← testing Facebook Snapchat-style self-destructing lengxoxo Messenger Indlela smart imithwalo babekwazi okuguqula air travel →